Ahoana ny famindrana ny bilaoginao ary hitazomana ny fotoana tadiavinao. Martech Zone
Alarobia 6 Janoary 2010 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Raha manana bilaogy efa misy ianao, ny vinavinanao dia manana fahefana motera fikarohana naorina amin'io sehatra na subdomain io ianao. Matetika, ny orinasa dia manomboka bilaogy vaovao fotsiny ary mahafoy ilay taloha. Raha very ny atiny taloha, dia mety ho fatiantoka lehibe izany.
Mba hitazonana ny fahefan'ny motera fikarohana, ity ny fomba mifindra monina amin'ny sehatra fitorahana bilaogy vaovao:
Alefaso ny atiny taloha momba ny bilaogy ary ampidiro ao amin'ny sehatra fitorahana bilaogy vaovao ianao. Na dia manao an'ity tanana ity aza ianao, dia tsara kokoa noho ny manomboka tsy misy atiny.
Manorata fanovana 301 avy amin'ny URL post blog taloha mankany amin'ny URL post blog vaovao. Ny sehatra sasany dia manana modules redirection na Plugins hanamorana izany.
Manorata redirect avy amin'ny feed RSS bilaogy taloha mankany amin'ny feed RSS bilaogy vaovao. Manoro hevitra ny hampiasa aho Feedpress mba hahafahanao manavao ny sakafo tsy misy fanelingelenana amin'ny ho avy (Na dia iriko aza ny hivoahan'ny olona iray miaraka amin'ny solon'ny Feedburner! Mahatsiravina izany).
Raha mamindra domains na subdomain ianao dia mbola azo atao ny miala amin'ny adiresy bilaogy vaovao. updated: Voamariko fa very ny laharan'ny sasany amin'ny mpanjifa rehefa manao subdomain izy ireo nefa indraindray afaka miverina haingana. Ny fanovana sehatra manontolo dia mety hisy fiatraikany lehibe. Hiezaka ny hisoroka an'izany aho amin'ny sarany rehetra.
Andramo ny ankamaroan'ny URL bilaoginao taloha ary alao antoka fa handroso tsara izy ireo.
Monitor Google Search Console ary Bing Webmasters ho an'ireo pejy izay tsy hita ary ahitsy. Aza manahirana ny manamarina isan'andro - afaka herinandro na roa vao hahita prob
Avoahy indray ny sitemap anao ary averina alefa isaky ny manitsy ireo entana ianao.
Raha manova ny fonenanao na ny subdomainanao ianao, ny fatiantoka lehibe indrindra horaisinao dia ireo tranonkala toa ny Technorati, izay mitaky ny fisoratanao anarana amin'ny adiresy bilaogy vaovao. Tsy manana fitaovana fanavaozana ny adiresy tena izy ireo.
Ity misy pikantsary an'ny Google Search Console sy ny fomba ahafahanao mitady referansa 404 Not Found:
Amin'ny alàlan'ny fiantohana ny atiny hitodiana tsara, tsy ianao irery ihany no hiantoka fa ireo mpitsidika dia mbola afaka manamboatra ny atiny tadiavin'izy ireo ihany koa, fa hamokatra pejy 404 Tsy Hita Mbola kely ianao. Fanamarihana iray momba an'ity… omeo Webmasters herinandro na roa haharaka anao! Aorian'ny famerenanao ireo adiresy ratsy ireo dia tsy hamboatra azy ireo avy hatrany ao amin'ny Webmaster (tsy azoko antoka ny antony!).
Amin'io fanamarihana io dia matetika no hitako fa mamoaka URL tsy marina ireo tranonkala ivelany - ka dia alefako tsara araka ny tokony ho izy ireo URL ratsy ireo!
Tags: 404bing webmastergoogle webmasterangon-drakitraangona momba ny laharam-pikarohanaWebmasterWebmaster
Antony: Fiantrana + Facebook = WIN!
Mar 24, 2010 ao amin'ny 6: PM PM
Manaiky aho fa mpamonjy aina ny plugin WordPress Redirection, tena tiako izy io. Enga anie mba ho fantatro tamin'izay ny fantatro izao, dia ho nahavonjy aretin'andoha be izany. Misaotra Douglas!